News - Bandhigga 26-aad ee Shiinaha ee Qalabka Teknolojiyada Caalamiga ah
Bandhigga 26aad Shiinaha ee Qalabka Teknolojiyadda
Bishii Sebtember 2, 2020, Bandhigga 26aad ee Shiinaha ee Caalamiga ah ee Teknolojiyadaha Teknolojiyada (CCE2020), oo ay maalgelisay Shiinaha Composites Group Co., Ltd., isla markaana ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen Shirkadda Shiinaha ee Iskuduwaha Warshadaha iyo Laanta FRP ee Bulshada Ceramic Society, ayaa laga furay magaalada Shanghai.
2020 waxaa loo qoondeeyay inuu noqdo sanad aan caadi aheyn taariikhda aadanaha. Tan iyo markii uu dillaacay cudurka, warshadaha qalabka isku dhafan ee Shiinaha iyo xitaa adduunka ayaa si ba'an loo saameeyay. Shirkado badan ayaa joojiyay shaqadii, joojiyay wax soo saarkii, hoos u dhigay kharashyada sanadlaha ah, iyo dib u eegista waxqabadka sanadlaha ah. . Xaaladdaan dhexdeeda, Bandhigga Isku-darka Caalamiga ee Shiinaha ayaa loo qabtay sidii loo qorsheeyay, oo soo jiitay in ka badan 600 oo carwo-gudaha ah iyo kuwa ajnebi ah, oo ujeeddadiisu tahay in uu hoggaamiyo warshadaha isku-dhafan ee ka soo baxa carada iyo si buuxda u soo kabtaan. Waxay keeneysaa cilmi baaristii ugu dambeysay ee warshadaha iyo xukunka, soo bandhigida tikniyoolajiyad casri ah iyo fursado iskaashi ganacsi ee shirkadaha isku dhafan.
In 2020, wajahaya xaaladda caalamiga ah ee qalafsan oo kacsan iyo saamaynta laba-geesood ee cudurka faafa ee pneumonia cusub, warshadaha qalabka isku dhafan ayaa la kulmay bilowga ugu adag. Xaaladda noocan oo kale ah oo adag, shirkadeennu waxay si firfircoon u raadineysaa xalal iyadoo shaqo fiican ka haysa ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa, iyadoo la adeegsanayo hal-abuurnimo tikniyoolajiyadeed, codsi qalab cusub ah, horumarinta suuqyada iyo tallaabooyin kale oo lagu dhammaystirayo waqtiga lumay ee ka dhanka ah isbeddellada.
"China International Composite Materials Exhibition" waa carwada teknoolojiyadda xirfadeed ee ugu weyn uguna saamaynta badan gobolka Aasiya iyo Baasifigga. Tan iyo markii la aasaasay 1995, iyada oo ujeedadu tahay kor u qaadida barwaaqada iyo horumarka warshadaha maaddooyinka isku dhafan, waxay abuurtay xiriir wadashaqeyn wanaagsan oo muddo dheer ah oo lala yeesho warshadaha, tacliinta, hay'adaha cilmi baarista sayniska, ururada, warbaahinta iyo waaxaha dowladda ee la xiriira, waxayna ku dadaalaysaa si loo dhiso dhammaan silsiladda warshadaha maaddooyinka isku dhafan Madal-xirfadeedka khadka tooska ah / khadka tooska ah ee isgaarsiinta farsamada, is-weydaarsiga macluumaadka, iyo is-weydaarsiga shaqaalaha ayaa hadda noqday fure muhiim u ah horumarinta warshadaha maaddooyinka isku-dhafan ee adduunka waana mid caan ku ah gudaha iyo dibedda.